Akpịrị Ọrịa cancer akpịrị, ihe na-akpata ya, nyocha ya na ọgwụgwọ
Nkọ Ọrịa Cancer
Ihe kpatara nsogbu
Na-egbochi Ọrịa cancer
Nkwado Ọrịa cancer
Home » Nkọ Ọrịa Cancer » Candị Ọrịa kansa » Ọrịa Cancer Anyị Na-emeso » Ọrịa Cancer
Ọrịa cancer akpịrị bụ ụdị cancer na-ebilite na akpịrị. Ọ na - aputa site na sel dị larịị nke na - eme n'ime akpịrị gị. Can nwere ike iche n’echiche olu gị dịka ụdọ akwara nke nwere akụkụ dị iche iche, dị ka tonsils, pharynx, epiglottis, na larynx ma ọ bụ igbe olu. N’isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya n’ihe niile ịchọrọ ịma gbasara kansa akpịrị, ihe ọghọm ya, ihe kpatara ya, mgbaàmà ya, nchọpụta ya, yana ọgwụgwọ.
Anatomy nke akpịrị
Akpịrị gị bụ ọkpọ ahụ nke na - amalite site na oke gị ma gbatị gbadata agbadata na pharynx na larynx gị. Ihe akwara gị bụ igbe olu gị, ebe ụdọ olu gị ga-adị. Ha na-ama jijiji ma mepụta ụda olu gị. Epiglottis bụkwa akụkụ nke akpịrị gị. Ọrụ ya bụ ichebe gị ka ị ghara iloda nri n'ime ikuku gị na nke ọzọ. Ọrịa akpịrị nwere ike ịmalite n'ụdị ọ bụla. Akụkụ ọzọ nke akpịrị gị bụ njikọta nke dị n’imi gị n’imi na n’iru, nke ana - akpọ nasopharynx. Ọnọdụ oropharynx bụ ebe ọnụnụ ụbụrụ gị na-ezute pharynx gị. N'ikpeazụ, laryngopharynx bụ ebe akpati gị na-ezute pharynx gị.
Kedu ka ọrịa cancer akpịrị dị?
Ọrịa kansa kansa na-arịa ọrịa kansa na isi, ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị n'etiti ụdị a. Ọ metụtara atụmatụ 12,410 ndị okenye na 2019 na US, ọ gburu ihe dị ka 3,760 mmadu nile. Kaosinadị, mbelata ụtaba niile n’etiti ndị mmadụ butere a 2% Mbelata na ọrịa cancer nke laryngeal, ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga. Onu ogugu afọ ise nke ọrịa laryngeal bụ 61%. Y’oburu n’aria cancer n’enweghi metastases, ihe nzoputa diri ihe di ka 78%. N’ozuzu, ka mkpụrụ ndụ ihe ọjọọ na-agbasa, nzere afọ ise ga-agbada.
Ọrịa hypopharyngeal na-emetụta atụmatụ 3,000 ndị mmadụ kwa afọ. Ọ gbata ndu afọ ise 33%, mana ọ bụrụ na achọpụta ma mesoo ya n'oge, ọ bụ 53%. Agbanyeghị, naanị banyere 17% nke ndị ọrịa nwere hypopharyngeal cancer ga-enweta nchoputa na ọgwụgwọ n'oge. Ọkara nke ndị nwere ụdị ọrịa a ga-ahụ ya ma jikwaa ya n'ihu ọnụnọ ndị obodo na ndị dị anya.
Kedu ihe na-akpata ọrịa cancer akpịrị?
Ndị ọkà mmụta sayensị amaghị ihe na-akpata ọrịa akpịrị. Ha kwenyere na mkpụrụ ndụ ihe ọjọọ bụ nsonaazụ nke ma ọ bụ mgbanwe DNA na-agbanwe sel dị mma ka ọ bụrụ ọrịa kansa. Mkpụrụ ndụ ndị a na-etolite ma na-ekewa oke ọsọ ọsọ ma nwee ike etuto ahụ. Ọ bụ ezie na anyị amaghị ihe na-akpata ọrịa akpịrị akpịrị, anyị maara na ụfọdụ ihe ọghọm na-ebuli ohere mmadụ nwere ịmalite ya.
Ihe ndị dị ize ndụ nke kansa akpịrị
Ihe ndị nwere ọghọm na-abawanye ohere mmadụ nwere ibute ọrịa. Ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha ewu ewu maka ọrịa cancer akpịrị:
Baccotaba ụtaba. Sm Smụ sịga na ị tobaccoụ sịga na-eme ka mmadụ ghara ibute ọrịa cancer akpịrị.
Mmanya. Alcoholụbiga mmanya ókè na-eme ka mmadụ nwekwuo ọrịa kansa akpịrị.
Papillomavirus mmadụ (HPV). HPV bụ ọrịa a na-ebute site na mmekọahụ (STD) nke na-ewelite ohere mmadụ nwere ibute ọrịa kansa akpịrị. Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na HPV na-akpata ihe dị ka 70% nke ọrịa cancer oropharyngeal na US.
Nri afọ na eriri. Eatingghara iri ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-etinye gị n'ihe egwu dị elu maka ọrịa kansa akpịrị.
Gastroesophageal reflux ọrịa (GERD) bu oria nke n’eme ka ihe ju adi n’onu n’onu n’azu n’apata na ano n’iru. Inwe GERD welitere ihe ize ndụ gi nke cancer akpịrị.
Ihe mgbaàmà na ihe ịrịba ama nke kansa akpịrị
Ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa cancer akpịrị bụ ọnya mgbu na-ekweghị ala ogologo oge. Ndị America Cancer Society na-atụ aro ka ị kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụrụ na akpịrị na-egbu gị mgbu na-adịgide karịa izu abụọ. Na mkpokọta, akara na akara nke kansa akpịrị na-adabere n'ọganihu ya na ọnọdụ ya. Ihe ndia bu ụfọdụ ezigbo akara ngosiputa na ihe isi ala nke akpiri akpukpo ukwu:
Hoarseness nke olu
Olu ozo agbanwe
Dysphagia ma ọ bụ nsi ike ilo mmiri
Mgbu na ntị ma ọ bụ agba agba
Akwa na akpịrị
Ọrịa ọnya anaghị agwọ agwọ
Ọbara na imi ma ọ bụ n'ọnụ
Izere n’ime ọnụnụ, imi, ma ọ bụ nke akụkụ ọgbụgba
Ebube na-enweghị atụ
Cancerdị ọrịa cancer akpịrị
Ihe ndị a bụ ụfọdụ ọrịa ọnya afọ, dị ka ọnọdụ ya si dị:
Ọrịa cancer Nasopharyngeal
Ọrịa kansa Glottic
Ọrịa kansa Supraglottic
Ọrịa kansa Subglottic
Nchoputa nke cancer akpiri
Ọ dị mkpa ka nchoputa ma gwọọ ọrịa cancer akpịrị ozugbo enwere ike. Tupu ị ga - eme usoro ọ bụla, dọkịta gị ga - ewere akụkọ gbasara ahụike gị ma mee nyocha ahụ. Determinzọ kachasị mma iji chọpụta ọrịa kansa akpịrị bụ site na biopsy. N'oge usoro a, dọkịta gị na-ewepụ otu atụ nke anụ ahụ nwere ike ịrịa ọrịa iji nyochaa ya n'okpuru microscope. Typesdị abụọ nke biopsy a rụrụ bụ biopsy ma ọ bụ agịga agịga dị mma. Might nwekwara ike ịchọ ụfọdụ nnwale iji gosipụta ihe nwere ike gbasaa mkpụrụ ndụ kansa, yana ibute ọrịa kansa. Agingkpakọ akpụ tumo dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ọgwụgwọ ziri ezi. N'ikpeazụ, enwere usoro ịkụ ọkpọ nke ga-eme ka dọkịta nwee ike iji tube were hụ ihe dị n'ime akpịrị gị. Ọrụ ha bụ inyere dọkịta aka iji anya nke uche ya mata ntutu ahụ. Panendoscopy, laryngoscopy, na pharyngoscopy bụ usoro bụ isi.
Gịnị bụ ọgwụgwọ akpịrị ọrịa akpịrị?
Họrọ usoro ọgwụgwọ ziri ezi na-adabere n'ọtụtụ ihe, dị ka afọ onye ọrịa, ahụike dum, ụdị, ọnọdụ, na ọkwa nke ọrịa kansa. Ihe ndị a bụ usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ anọ maka ọrịa kansa akpịrị:
Ngwọta e mere atụmatụ
Buru n’uche na usoro ọgwụgwọ ọ bụla nwere ụfọdụ ọghọm na nsonaazụ ya. I nwere ike ikwurita dọkịta gị iji mụtakwuo banyere onye ọ bụla na otu esi ejikwa ha.
Ọgwụ Ọrịa Cancer anyị
Dr. Adem bụ ọkachamara maka ọgwụ cancer ọzọ
Copyright © 2020. Nke Dr.-Adem.com mepụtara